An Interview With Palpa School
ICDC को सहयोगले पठनपाठन सहज बनाउन ठुलो मद्दत पुगेको छ ।
( KKS Germany को सहयोगमा ICDC Nepal ले 'विद्यालय भवन पुनसंरचना तथा बालमैत्री वातावरण सहयोग कार्यक्रम' अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न गाविसका ११ वटा विद्यालयमा २६ वटा कक्षा कोठा पुनर्निर्माण भूकम्पबाट अति प्रभावित र अति विपन्न बालबालिकाहरु हुन् । यो कार्यक्रमले भूकम्पका कारणले क्षति भएका विद्यालय पुननिर्माण गर्ने, विद्यालयका लागि फर्निचर, शौचालय, तथा खानेपानी, शैक्षिक सामग्री वितरण सम्बन्धि क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरेको छ । उक्त परियोजना सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमध्ये पाल्पा सामरीभञ्ज्याङ माध्यमिक विद्यालय, पाल्पाभञ्ज्याङ निलकण्ठ नपा ९ धादिङका प्राध्यापक श्री नरहरी लम्सालसँग परियोजनाको बारेमा गरिएको कुराकानी)
तपाईंको विद्यालयको बारेमा बताइदिनुहोस् न ।
मेरो विद्यालय, श्री पाल्पा सामरीभञ्ज्याङ माध्यामिक विद्यालय निलकण्ठ ९ पाल्पा भञ्ज्याङ्गमा रहको सामुदायिक विद्यालय हो । यस विद्यालयमा कक्षा १० सम्ममा करीव ३५० जना विद्यार्थीहरु अध्यायन गर्दछन् । गाँऊको विद्यालय र सीमित क्षेत्र हुनुका साथै भौतिक पूर्वाधारहरुमा पनि कमजोर नै छ । यो विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरु पनि प्राय सबै गरीव परिवारका छन् ।
भूकम्पपछि विद्यालयको अवस्था कस्तो थियो ?
भूकम्पको कारणले विद्यालय पठनपाठन पूर्णरुपमा प्रभावित भएको थियो, भौतिक संरचनाहरु पूर्णरुपमा नष्ट भएका थिए । सबै कक्षाका विद्यार्थीहरुलाइ एउटै कक्षाकोठामा राख्नुपर्ने वाध्यता थियो । यसको साथमा विद्यार्थीहरुको दैनिक जीवनमा ठूलो असर परेको अवस्था थियो । ७२ सालको भूकम्प अघिपनि विद्यालयको भौतिक वातावरण सम्पन्न थिएन । यद्दपि भूकम्पपछि विद्यालयमा ठूलो असर पर्‍यो । विद्यालय भवनका १६ कोठा मध्ये १२ कोठा पूर्णतया नष्ट भएका थिए । त्यसभन्दा पहिले विद्यालयका सम्पुर्ण कक्षाकोठाहरु कच्ची नै थिए र शैक्षिक समस्याको रुपमा रहेको भौतिक संरचनाको कठिनाईले गर्दा अत्यन्तै अफ्ठ्यारो परिस्थितिका साथ चलिरहेको थियो । भुकम्प गएपछि समस्या झनै भयावह भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक तथा अभिभावक र अन्य व्यक्तिको सहयोगबाट बाँस र जस्ताले बारबेर गरेका अस्थाई टहरामा विद्यार्थीहरु राख्न बाध्यहुनु पर्‍यो । झण्डै ३५० विद्यार्थी भग्नावशेषको रुपमा रहेका कक्षाकोठामा राखेर पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि अन्यत्र जग्गा भाडामा लिएर पनि अस्थाई टहराहरु निर्माण गरियो । भौतिक संरचना अन्तर्गत कालोपाटी फर्निचर, विद्यार्थीहरुले पठनपाठन गर्दै आएका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको मनस्पटलमा उब्जिएको त्रसित भावना, अभिभावकहरुले विद्यार्थी विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने दुविधा लगायतका समस्याहरु देखापरे । विद्यार्थीले प्रयोग गर्दै आएका शौचालय र खानेपानीका संरचनाहरु समेत क्षति भएका थिए ।
आई.सी.डी.सी. ले गरेको सहयोगका बारेमा बताइदिनुहोस् न ।
भूकम्पपश्चात व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक समिति सबैले कसरी विद्यालयको संरचना निर्माण गर्ने र पठनपाठन सुचारु गर्ने भन्ने तर्फ उन्मुख थिए । जसको कारणले हामिहरुले विभिन्न व्यक्ति संघसस्थाहरुसँग सहयोगको अपेक्षा राख्यौं । त्यसै सन्दर्भमा आई.सी.डी.सी. धादिङ हाम्रो विद्यालयमा आएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी हाम्रा आवश्यकता र संस्थाले गर्नसक्ने सहयोगका बारेमा छलफल भयो । त्यसपश्चात विद्यालयमा चारकोठाको भवन निर्माण सहयोग भयो, जुन सहयोग कमदमै अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण थियो । त्यसका साथै संस्थाले शौचालय निर्माणमा पनि सहयोग निर्माणमा पनि तदारुकताका साथ अत्यन्तै छिटो सम्पन्न गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । संस्थाले अति विपन्न विद्यार्थिहरुका लागि पोशाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराई तत्कालीन असहज परिस्थितिबाट सहज परिस्थितिमा ल्याउन ठूलो सहयोग गर्‍यो । त्यसका अलावा विद्यालयमा बालक्लव गठन गरी विभिन्न मनोरञ्जनात्मक र सन्देशमुलक अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेर र भूकम्पबाट त्रसित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा घुलमिल हुन र नियमित विद्यालय आउन सहयोग गर्‍यो । समग्रमा भन्नुपर्दा ICDC को सहयोगले पठनपाठन सहज बनाउन ठूलो मदद्दत पुगेको छ ।
संस्थाको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पूर्णरुपमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको ठाँऊमा विद्यालयको प्राङ्गणमा नयाँ भवन बन्दाको अवस्थामा विद्यालयको पुरै शैक्षिक वातावरण सकारात्मक भयो । सबैबीच हर्ष र खुशी छायो । व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी र शिक्षक साथीहरु पनि उत्साहित हुनुभयो। विद्यालय परिवारको लागि उक्त कार्य एकदमै सह्रानीय छ । अझैपनि भौतिक संरचनाहरु पूर्णरुपमा विकास नभएको हुनाले यस्ता खालका थप सहयोग भएदेखि विद्यालयमा पठनपाठन अझै राम्रोसँग सुचारु हुने थियो भन्ने विद्यालय परिवारले अपेक्षा राखेको छ । जिल्लामा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्था त थुप्रै छन् । तर विगत लामो समयदेखि आई.सी.डी.सी. ले शैक्षिकक्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ । सबै सरोकारवाला निकायहरु यस संस्थाप्रति एक किसिमको अपेक्षा राखिरहेको अवस्था छ । हामी हाम्रा तर्फदेखि संस्थाले गरको सहयोगका लागि एकदमै आभारी छौं । र, अझै पनि बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि यस संस्थाले सहयोगको निरन्तरता गरिदिनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।